Izibonelelo ezi-6 eziphezulu zezeMpilo zeServeratrol Supplements （Eyona nto ibanzi comprehensive
Ikhaya > Izibonelelo zeReveratrol
Izibonelelo ezi-6 eziPhezulu zeZibonelelo zeReveratrol Supplements
Ukuba ujonga indawo yokuthenga I-Resveratrol powder ngobuninzi, inkampani enye onokuyithemba ngokungafunekiyo ekufumaneni izinto zokwenza izinto yiCofttek. Inkampani, ngenxa yeqela layo lophando olomeleleyo kunye nesebe lokuthengisa elizinikeleyo, iseke ubukho behlabathi lonke ngexesha nje elifutshane- inabathengi kunye namaqabane kwihlabathi liphela. I-resveratrol eveliswe yinkampani iza kwiibhetshi ezinkulu ze-25 kgs kwaye ifunyenwe kwizithako ezikumgangatho ophezulu, ngaloo ndlela iqinisekisa ukuba izongezo eziveliswe kuyo zinokuthenjwa ngomgangatho nokusebenza ngokukuko. Ukuba ufuna ukuthenga i-resveratrol ngobuninzi, indawo ekuphela kwayo yokuthenga cofttek.com.
I-Resveratrol (501-36-0) sisixhobo se-polyphenolic esifumaneka kwizityalo ezininzi kodwa zixhaphake kakhulu kwiidiliya. I-Resveratrol ihlala ibizwa ngokuba yi 'stilbene' ngenxa yesakhiwo sayo kwaye yeyona stilbene ithandwayo. I-Stilbenes yimixube yezityalo exhaphake kakhulu kusapho lwediliya nangona zinokubakho ngesixa esincinci kwezinye izityalo ngokunjalo. Ngaphakathi kweediliya, i-resveratrol ikhona kulusu kwaye isebenza njenge-phytoalexin okanye ityhefu yesityalo, ikhusela iidiliya kwizifo ezahlukeneyo.
Iminyaka emininzi, abaphandi bahlala bedidekile kukukwazi kwabantu baseFrance ukutya ukutya okunotyebileyo kumanqatha agcweleyo kwaye bahlala bengaphazanyiswa zizifo zemithambo. Abantu abaninzi bacinga ukuba i-resveratrol iyimpendulo yale 'French Paradox' yeSifo seNtliziyo. Kwinyani, iwayini ebomvu idlala indima encinci ekwenzeni le 'French Paradox'. Ukutya kunye nendlela yokuphila zibalulekile ngokulinganayo.
Ezo mazwe apho ukuthandwa kwewayini ebomvu kuyathandwa, abemi bafunyanwa betya ukuya kuthi ga kwi-0.2 mg ye-resveratrol yonke imihla. Nangona kunjalo, kumazwe amaninzi apho iwayini ebomvu ingakhethwanga njengaseSpain okanye eMntla Melika, abantu bathambekele ekusweleni kwi-resveratrol. Abavelisi, kwihlabathi liphela, ngenxa yoko beza nezongezo ze-resveratrol ezithembisa izibonelelo ezininzi zempilo ngaxeshanye.
Umbuzo ngulo: ngaba ukuphinda ureveratrol kunefuthe njengoko ezi zongezo zibanga ukuba kunjalo? Makhe sijonge ezinye zokusetyenziswa kweververatrol.
Kutheni sifuna iReveratrol?
Iwayini ebomvu yehlisa i-cholesterol, inyani uninzi lwethu luyayazi. Nangona kunjalo, ababaninzi kuthi abaziyo ukuba sisityalo esine-resveratrol enika nayiphi na iwayini ebomvu le ndawo. Ngaphandle kwewayini ebomvu, i-resveratrol ifumaneka kwezinye ukutya. I-Resveratrol (501-36-0) yaqala ukubekwa bucala ngo-1939 kwaye kule minyaka idlulileyo, uphando olwenziwe kule khompawundi lutyhile izibonelelo zalo ezahlukeneyo zempilo, nezikhokelele kwimfuno eyandayo yale ndawo. Ngaphandle kokunciphisa i-cholesterol, i-resveratrol yaziwa nangokuthi yonyuse umsebenzi wokuqonda kunye nokulawula uxinzelelo lwegazi.
Kweli nqaku libanzi malunga ne-resveratrol, sixoxa malunga nezibonelelo zayo, ukusetyenziswa kwayo, kunye nethamo elikhuselekileyo sikwacebisa malunga nesongezo sedveratrol esigqibeleleyo sika-2021 nokuba ungayithenga phi indawo yezityalo ngobuninzi. Nangona kunjalo, masiqale ngeziseko zokuqala.
Zithini izibonelelo zereveratrol?
Ihlisa uxinzelelo lwegazi
Ngo-2015, uphando luye lwabonisa ukuba umthamo ophezulu we-resveratrol unciphisa uxinzelelo lwegazi lwe-systolic esilubonayo njengenombolo ephezulu ekufundeni uxinzelelo lwegazi. Uxinzelelo lwegazi oluphezulu luqwalaselwa njengesoyikiso kwintlalontle yomntu njengoko isonyusa umngcipheko wezifo zentliziyo emntwini. I-Resveratrol iyanciphisa uxinzelelo lwegazi ngokuvelisa i-nitric oxide eninzi, leyo leyo ibangela ukuba imithana yegazi ikhululeke. Nangona kukho ubungqina obaneleyo bokucebisa ukuba i-resveratrol inciphise uxinzelelo lwegazi, kufuneka kwenziwe uphando ngakumbi malunga nedosi echanekileyo. (1) Sonia L.Ramírez-Garza, uEmily P. Laveriano-Santos,
Kn Iyaziwa ngokuba kukhuthaza impilo yengqondo
Izifundo ezenziweyo kule minyaka idlulileyo zibonise ukuba ukusetyenziswa kwewayini ebomvu rhoqo kunciphisa ukwehla kwengqondo okubangelwa bubudala. Oku ikakhulu kungenxa ye-resveratrol ekhoyo kwiwayini ebomvu. I-Resveratrol inezinto ezichasayo kunye ne-anti-oxidant kwaye ithintela ukusebenza kwe-beta-amyloids, ejongene nokuqala kwe-Alzheimer's.
③ I-Resveratrol iluncedo ngokukodwa kubantu abanesifo seswekile
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, kwizifundo ezininzi zezilwanyana eziye kwenziwa ukufundisisa isiphumo sokubuyela kwisifo seswekile. Kwizilwanyana, i-resveratrol yonyusa imvakalelo ye-insulin kwaye iyamisa ukusebenza kwe-enzyme enoxanduva lokuguqula iglucose ibe yi-sorbitol. I-Sorbitol iswekile ekhokelela kuxinzelelo lwe-oxidative kwaye ibangele iingxaki kubantu abanesifo seswekile. Ngokwahlukileyo, izazinzulu zikholelwa ekubeni i-resveratrol ivuselela i-AMPK, iprotheni eneswekile yeglucose, ukuze inciphise inqanaba leswekile emzimbeni.
Inokuthi icinezele iiseli zomhlaza kwaye inyuse ixesha lokuphila kwabantu
Uphando lubonakalisile ukuba i-resveratrol inokuthintela ukukhula kweeseli zomhlaza ngaphakathi emzimbeni ngokutshintsha intetho yeeseli zomhlaza. Okubaluleke ngakumbi, kwizifundo zezilwanyana zibonise ukuba i-resveratrol inhibisa ukusasazeka kwe-cancers-exhomekeke kwi-hormonal ngokungenelela kwindlela ethile yamahashi ichazwa ngayo.
Ngokufanayo, isiphumo sobomi esonyusa ubomi be-resveratrol besi sisihloko sengxoxo enkulu phakathi kososayensi. Kwizifundo ezininzi zezilwanyana, i-resveratrol yaphucula ixesha lokuphila lesilwanyana esikhethiweyo ngokuvula iintlobo ezithile ezaziwayo ukulwa nokugcina kude izifo ezinxulumene nobudala. Izazinzulu zilindele iziphumo ezifanayo ebantwini. Nangona kunjalo, uphando olungaphezulu luyafuneka.
Is Sisisombululo esisebenzayo seArthritis kunye nePain Joint
I-Resveratrol sisisombululo esisebenzayo esichasene nezifo zombini zamalungu eentlungu. Le khompawundi esekwe kwisityalo ikhusela umzimba ngokuchasene ne-aches edibeneyo kunye nesifo samathambo ngokuthoba isisu. Ezinye izifundo zezilwanyana zibonise ukuba i-resveratrol ikhusela amalungu ngokunciphisa ukuvuvukala.
⑥ Inika ukhuseleko kwizifo zentliziyo
I-Resveratrol ikhusela intliziyo ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Izifundo zezilwanyana zibonise ukuba le khompawundi ikhusela kwizifo zentliziyo ngokuthi imise ukusebenza kwe-enzyme ethile, edityaniswa nemveliso ye-cholesterol. Okubaluleke ngakumbi, ekubeni i-resveratrol ineempawu ze-antioxidant, iyanciphisa i-oxidation ye-LDL cholesterol, enoxanduva ngokuyintloko lokwakha i-plaque kwiindonga ze-artery.
Ngaba i-Resveratrol ilungile kwisibindi sakho?
Inike ukhuselo lwesibindi ngokuchasene nokwenzakala kwemichiza, cholestatic kunye notywala. I-Resveratrol inokuphucula i-glucose metabolism kunye neprofayili ye-lipid kunye nokunciphisa i-fibrosis yesibindi kunye ne-steatosis. Ngapha koko, ikwazile ukutshintsha i-hepatic cell fatty acid.
Kukuphi ukutya okunzima esibindini?
Ukutya oku-6 ukunqanda ukuba unesibindi esinamafutha
Utywala sesona sizathu siphambili sesifo esinamafutha sesibindi kunye nezinye izifo zesibindi.
Yongeza iswekile. Hlala kude nokutya okuneswekile njengeelekese, iicookies, iisoda, kunye nejusi yeziqhamo.
Ukutya okuthosiweyo. Ezi zinamafutha aphezulu kunye neekhalori.
Isonka esimhlophe, irayisi kunye ne-pasta.
Ndingasomeleza njani isibindi sam?
Iindlela ezili-13 zesibindi esisempilweni
Gcina ubunzima obusempilweni.
Yitya ukutya okunezondlo.
Sebenzisa utywala ngokufanelekileyo.
Kuphephe ukusebenzisa iziyobisi ezingekho mthethweni.
Gwema iinaliti ezingcolileyo.
Fumana unyango ukuba uthe wachaphazeleka egazini.
Musa ukwabelana ngezinto zempilo yakho.
Ziqhelise ngesondo elikhuselekileyo.
Hlamba izandla zakho.
Landela izikhokelo kuwo onke amayeza.
Ngaba iResveratrol ilungile kwizintso?
I-Resveratrol inokuthintela ukwenzakala kwezintso, kubandakanya isifo seswekile, ukonzakala kwezintso okubangelwa sisiyobisi, ukulimala kwe-aldosterone okubangelwa kukulimala kwezintso, ukulimala kwe-ischemia-reperfusion, ukulimala kwezintso okubangelwa sisifo se-sepsis, kunye nezintso eziphazamisayo.
Ngaba ibhotolo yamandongomane ine-resveratrol?
Ipeanut Butter: Ibhotolo yamandongomane ilungele ukunxiba ii-apile kunye neseleri, kodwa ikwaqulathe i-resveratrol (ukuya kuthi ga kwi-13 mg ngekomityi nganye). Ipeanut butter ingumthombo omkhulu we-niacin kunye ne-manganese.
Ngaba iResveratrol ikunceda ukunciphisa umzimba?
Ngokubanzi, uhlalutyo lwangoku lwe-meta lubonakalise ukuba i-resveratrol intake yanciphisa kakhulu ubunzima, i-BMI, i-WC kunye nobunzima bamafutha, kwaye yonyusa kakhulu ubunzima, kodwa ayichaphazelanga amanqanaba e-leptin kunye ne-adiponectin.
Yintoni iResveratrol eyenzayo kulusu?
I-Resveratrol inokungena ngokulula kuthintelo lolusu kwaye icothise inkqubo yokuguga kolusu. I-Resveratrol ikwanayo ne-anti-inflammatory, anti-microbial, kunye ne-antioxidant iipropathi, oko ke kugcina ulusu lwakho lusempilweni kwaye lukhululekile ekuphumeni nasekudumbe.
Yiyiphi iwayini enexabiso eliphezulu le-resveratrol?
I-Resveratrol inxulunyaniswa kakhulu neidiliya ezibomvu kunye newayini ebomvu eyenziwe ngeediliya. Iiwayini ezinje ngeMalbec, iPetite Sirah, iSt.Laurent kunye nePinot Noir zinowona mgangatho uphezulu we-resveratrol.
Ngaba i-resveratrol inyusa amandla?
I-Resveratrol ichazwe njengokulinganisa isithintelo sekhalori, ekhokelela ekuphuculeni ukusebenza komthambo kunye nokuziva kwe-insulin (ukonyusa inkcitho yamandla), kunye nokuba nefuthe lokunciphisa amanqatha emzimbeni ngokuthintela i-adipogenesis, kunye nokwandisa ukuhlanganiswa kwe-lipid kwizicubu ze-adipose
Ngaba iResveratrol yehlisa uxinzelelo lwegazi?
I-Resveratrol ilamla ukuthoba uxinzelelo lwegazi ngokudodobalisa inducu yeprotein oxidation, ngakumbi ngamaxesha oxinzelelo lwe-oxidative, indlela enokuba yinto eqhelekileyo kwiimolekyuli ze-antioxidant.
Kukuphi ukutya okuphezulu kwi-resveratrol?
Usenokuba sele udle inani elifanelekileyo le-resveratrol. Kufunyenwe kukutya okunje ngamandongomane, iipistachios, iidiliya, iwayini ebomvu nemhlophe, iiblueberries, iicranberries, kunye necocoa kunye netshokholethi emnyama. Izityalo apho oku kutya kuvela khona kwenza i-resveratrol yokulwa nosulelo lomngundo, imitha ye-ultraviolet, uxinzelelo kunye nokwenzakala.
Kukuphi ukutya okuneyona quercetin?
I-Quercetin iqulethwe ngobuninzi kwii-apula, ubusi, i-raspberries, i-anyanisi, iidiliya ezibomvu, i-cherries, iziqhamo ze-citrus kunye nemifuno eluhlaza. Phakathi kwemifuno kunye neziqhamo, umxholo wequercetin uphezulu kwi-anyanisi. Umbala webhalbhu kunye nohlobo kubonakala ngathi yinto emisela uxinzelelo lwe-quercetin kwi-anyanisi.
Ngaba i-resveratrol inyusa i-testosterone?
Abaphandi bafumene amanqanaba e testosterone ehle ngeepesenti ze-23.1 phakathi kwabasetyhini abafumana isongezelelo se-resveratrol. Xa kuthelekiswa, amanqanaba e-testosterone anyuke nge-2.9 yepesenti kwiqela le-placebo.
Kwenzeka ntoni ukuba utya iiviniyile mihla le?
Ukutya ukutya okunesondlo kweediliya kunye nokutya kwakho kwemihla ngemihla kunokukusindisa kwiintsimbi. Ezi zidiliya zomileyo zisezantsi kakhulu kwiikhalori kwaye zinencasa ngokwendalo. Ziyinto enesibindi, ke ngoko, ukunceda umzimba uzive ugcwele ixesha elide ngokusebenza kancinci.
Ngaba ungathatha i-resveratrol eninzi?
Xa uthathwa ngeedosi ukuya kuthi ga kwi-1500 mg yonke imihla ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-3, i-resveratrol i-POSSIBLY SAFE. Iidosi eziphezulu ukuya kuthi ga kwi-2000-3000 mg yemihla ngemihla zisetyenziswe ngokukhuselekileyo kwiinyanga ezi-2-6. Nangona kunjalo, la maqondo aphezulu e-resveratrol anokubangela iingxaki zesisu.
Ngaba iResveratrol testosterone esezantsi?
I-Resveratrol inciphisa amanqanaba okujikeleza kwe-androgen ngaphambili kodwa ayinampembelelo kuyo, testosterone, dihydrotestosterone, amanqanaba e-PSA okanye ivolumu yeprostate.
Ngaba iResveratrol iyasebenza ngokwenene?
Olunye uphando lubonisa ukuba i-resveratrol inokudibaniswa nomngcipheko omncinci wokuvuvukala kunye nokuqhaqha kwegazi, okunciphisa umngcipheko wesifo senhliziyo. Kodwa ezinye izifundo azifumananga zibonelelo zisuka kwi-resveratrol ekuthinteleni isifo sentliziyo.
Yintoni iResveratrol eyenzela ubuso bakho?
Ukusetyenziswa kwesihloko, i-resveratrol inceda ukukhusela umphezulu wolusu, iphazamise kwaye incede ikhuphe impembelelo engeyiyo kwindalo esingqongileyo, kwaye ikhanyise umbala obonakala udiniwe. Inezinto ezibonakalayo zokuthomalalisa ulusu ezinokukunceda ukunciphisa ukubonakala kobomvu
Ndingayithatha kangaphi i-resveratrol mihla le?
Imilinganiselo efanelekileyo ye-resveratrol ixhomekeke kumsebenzi owenzelwa isongezelelo. Umzekelo, ukongezwa kokuhamba kwegazi lobuchopho kufuna ukuba abantu basebenzise i-resveratrol kuluhlu lwe-250-500 mg ngelixa kumiselwe i-aromatase inhibition, uluhlu luhlala lugcinwa malunga ne-500 mg ngosuku.
Abantu abaphilileyo abathatha i-resveratrol ukuphucula impilo yentliziyo okanye ukuphucula impilo ende bayacetyiswa ukuba bagcine idosi yabo phakathi kwe-150-445 mg. Nangona kunjalo, abo banengxaki yokuphazamiseka bayacetyiswa ukuba bagcine idosi iphantsi kwi-5-10mg ngosuku. Ukuba unengxaki naziphi na iimeko, qiniseka ukubonisana nogqirha wakho ngaphambi kokuqala ngalo naluphi na unyango
Ngaba iResveratrol ikhanyisa ulusu?
Kwizifundo zezilwanyana nakwizilingo zeklinikhi, i-1% ye-resveratrol ibonakalisiwe ukunciphisa i-pigmentation ebangelwa yi-UV xa isetyenziswa ngokwezihloko kulusu. Ii-analogs ze-resveratrol, i-RTA kunye ne-RTG, ikwabonakalise ukukhanya kwesikhumba somntu kwizilingo zeklinikhi kuvavanyo oluvavanyiweyo (i-04% RTA, 0.8% RTA kunye ne-0.4% RTG).
Ufaka njani i-resveratrol ebusweni bakho?
Uluhlaza uthi iiserum, zisebenzise emva kokuba ucoce, okanye ukuba usebenzisa i-toner kwinkqubo yakho yolusu, uya kuyifaka emva kwelo nyathelo. Ukuba usebenzisa i-resveratrol kwisithambisi, uya kuyisebenzisa kanye emva kokucoca kunye ne-toning, kabini imihla ngemihla, kusasa nangokuhlwa.
Ngaba i-Resveratrol ilungile kwi-acne?
I-antioxidant ebizwa ngokuba yi-resveratrol efumaneka kwiidiliya kunye newayini ebomvu inokukunceda ukucoca ukuphuma okungathandekiyo, isifundo esitsha esivela kwi-UCLA esifunyenweyo. Xa abaphandi basebenzise i-antioxidant resveratrol kuhlobo lwee-bacteria ezibangela amabala, bafumanisa ukuba kuthintele ukukhula kweebugs ezivelisa amabala ixesha elininzi.
Ngaba i-resveratrol ikhuselekile kwizintso?
Ngaba i-CoQ10 yenzakalisa izintso zakho?
Iziphumo ebezingalindelekanga ezivela kwiCoQ10 zibonakala zinqabile kwaye zinobulali. Babandakanya urhudo, isicaphucaphu, kunye nesilungulela. Iingozi. Abantu abanezifo ezinganyangekiyo ezinje ngokusilela kwentliziyo, izintso okanye iingxaki zesibindi, okanye isifo seswekile kufuneka bakulumkele ukusebenzisa esi songezelelo.
Kukuphi ukutya okune-resveratrol ephezulu?
Kufunyenwe kukutya okunje ngamandongomane, iipistachios, iidiliya, iwayini ebomvu nemhlophe, iiblueberries, iicranberries, kunye necocoa kunye netshokholethi emnyama. Izityalo apho oku kutya kuvela khona kwenza i-resveratrol yokulwa nosulelo lokungunda, imitha ye-ultraviolet, uxinzelelo kunye nokwenzakala.
Zeziphi iivithamini ezinzima kwizintso?
Amavithamini anyibilikayo atyebileyo (A, D, E kunye no-K) kunokwenzeka ukuba akhe emzimbeni wakho, ke ezi ziyathintelwa ngaphandle kokuba umiselwe ngugqirha wakho wezintso. I-Vitamin A ibaluleke kakhulu, njengoko amanqanaba enetyhefu enokwenzeka ngezibonelelo zemihla ngemihla.
Kukuphi ukutya okunceda ukulungisa izintso?
Ngaba iReveratrol ikhuselekile?
I-Resveratrol ethathwe kwiidosi ukuya kuthi ga kwi-1500 mg yonke imihla ngomlomo ithathwa njengekhuselekile. Ixesha lokutya, nangona kunjalo, akufuneki lidlule kwiinyanga ezi-3. Amanqanaba aphezulu kwi-2000-3000 mg yonke imihla anokuthathwa kodwa ayaziwa ukuba abangela imiba yesisu.
Abafazi abakhulelweyo nabancancisayo kufuneka bathathe izongezo zerveratrol ngezixa ezincinci. Nangona kunjalo, kuya kufuneka bazame kwaye bafumane i-dosage yabo efunekayo yokusela kwimithombo yendalo, efana nolusu lomdiliya kunye nejusi yediliya. Iewayini akufuneki ukuba zitye neli qela.
Abantu abanengxaki yokuphalaza ukopha kufuneka bangahlali ne-resveratrol njengoko inciphisa ukugcwala kwegazi. Ngokufanayo, abantu abaphethwe ziimeko ezinobuthathaka be-hormone, ezinjenge-ovarian, i-uterine, okanye umhlaza webele kufuneka bahlale kude nezongezelelo zerveratrol.
Ngaba iMalbec ilungile entliziyweni yakho?
Iidiliya zeMalbec zinezona zikhumba zishinyeneyo kuzo zonke iintlobo zewayini-zomdiliya. Oku kuthetha ukuba zilayishwe nge-resveratrol antioxidants ezizitshixo zempilo ye-cardiovascular and immune.
Ngaba i-Resveratrol ingabangela iintloko?
Siye sabonisa ukuba i-resveratrol yenza ngokuphucula ukusebenza kwe-endothelial vasodilator, ekhokelele abanye ukuba bacebise ukuba i-resveratrol kwiwayini ebomvu inokuba sisizathu se-migraine.
Ziziphi iziphumo ebezingalindelekanga zokuthatha i-resveratrol?
I-Resveratrol ayibonakali ineziphumo ebezingalindelekanga kwiidosi zexesha elifutshane (1.0 g). Ngaphandle koko, kwiidosi ze-2.5 g okanye nangaphezulu ngemini, iziphumo ebezingalindelekanga zinokubakho, njengesicaphucaphu, ukugabha, urhudo kunye nokungasebenzi kwesibindi kwizigulana ezinesifo esinamafutha
Yintoni i-resveratrol esetyenziselwa ukunyanga?
Ukuthandwa okukhulayo kwe-resveratrol kunokubangelwa kukusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo kwemveliso. I-Resveratrol izongezo zonyusa ukunciphisa umzimba kubantu abadala kunye nokukhuthaza ulusu oluhle. Izongezo zerveratrol, xa zithathwe ngaphambi kokusebenza, zikonyusa izibonelelo ezinxulumene nokuzilolonga kakhulu. Uphando luye lwangqina ukuba i-Resveratrol iyanciphisa i-glucose yegazi kunye nokuphucula ukuhamba kwegazi. Iyonyusa ubuntununtunu be-insulin kwaye ke, oko kujongwa njengezongezelelo ezilungileyo kubantu abanesifo seswekile. Ikwakhuthaza impilo-ntliziyo kunye nokunciphisa i-triglycerides. Okokugqibela, iyawunciphisa umsebenzi weeseli zomhlaza kwaye sisisombululo esisebenzayo ngokuchasene ne-arthritis engapheliyo kunye nepende edibeneyo.
Ngaba iResveratrol inciphisa i-estrogen?
I-Resveratrol ibonakalisiwe ukuba icinezela ukwanda kweeseli zomhlaza webele kunye neeseli zomhlaza webele kwiinkqubo zenkcubeko yeseli. Isebenza njenge-agonist ye-estrogen okanye umchasi ngokuxhomekeke kwiindidi zeseli, i-estrogen receptor isoform, kunye nobukho be-estrogens engapheliyo
Zeziphi iimpawu ezibonisa ukuba kukho undonakele kwizintso zakho?
Utshintsho kwindlela ochama ngayo.
I-Pee ene-foamy, inegazi, ibala, okanye imdaka.
Intlungu ngelixa uchama.
Ukudumba kwiingalo zakho, izihlahla, imilenze, amaqatha, ejikeleze amehlo akho, ubuso, okanye isisu.
Imilenze engenakuphumla xa ulele.
Intlungu edibeneyo okanye yethambo.
Ubuhlungu embindini wokubuyela apho izintso zikhona.
Udiniwe ngalo lonke ixesha.
Ndingayithatha i-resveratrol ngengxaki ye-thyroid?
Ezi datha zibonisa ukuba i-resveratrol sisithinteli sokubonisa kwe-NIS kunye nokusebenza kwiiseli eziqhelekileyo ze-thyroid. Ngaphaya koko, i-resveratrol ibonakala ngathi inendima yokuphazamisa i-thyroid, kwaye ke sicebisa ukuba silumke ngokungenisa isixa esikhulu se-resveratrol.
Yeyiphi eyona ndlela ifanelekileyo yokuhlaziya i-resveratrol?
Iwayini ebomvu ineyona resostatrol iphezulu yokutya. Oku kubulela ixesha elichithwe ziintsuba zeediliya ekubiliseni ukwenza iwayini ebomvu. Ubukho beResveratrol kwiwayini ebomvu sesinye sezizathu zokuba usenokuba uyive ityiwa njengentliziyo-esempilweni.
Ngaba ii-apile zine-resveratrol?
Iqela labaphandi kwiYunivesithi yaseWashington State libonakalise ukuba iidiliya, amaqunube amnyama, amaqunube, amaqunube kunye nama-apile, atyebile kwi-resveratrol, atshisa amanqatha ngaphezulu Nantsi indlela. Isicwangciso esitsha sokuthintela nokunyanga ukutyeba kakhulu silele kwi-antioxidant efumaneka kwiziqhamo ezininzi: i-resveratrol.
Ndifanele Ndithenge Phi iPreveratrol Powder in Bulk?
Xa abantu beqonda ngakumbi izibonelelo ze-resveratrol, imfuno ye-resveratrol supplements iye yanda kakhulu kwiimarike. Oku kukhokelele kwiinkampani ezenza imveliso ezikhuphisana ukuba zivelise izongezo ezikumgangatho ophezulu ukuze zithathe inxaxheba kwimarike. Ukuba ungumcebisi wezempilo ocwangcisa ukufaka i-resveratrol kwimarike yokuncedisa, kufuneka uqinisekise ukuba ufumana i-resveratrol powder ephezulu. Ukufunxa izinto ezikumgangatho olungileyo linyathelo lokuqala lokuqinisekisa impumelelo yalo naliphi na ishishini.
Ukuba ufuna indawo thenga i-resveratrol powder ngobuninzi, inkampani enye onokuyithemba ngokungafunekiyo ekufumaneni izinto zokwenza izinto yiCofttek. Inkampani, ngenxa yeqela layo lophando olomeleleyo kunye nesebe lokuthengisa elizinikeleyo, iseke ubukho behlabathi lonke ngexesha nje elifutshane- inabathengi kunye namaqabane kwihlabathi liphela. I-resveratrol eveliswe yinkampani iza kwiibhetshi ezinkulu ze-25 kgs kwaye ifunyenwe kwizithako ezikumgangatho ophezulu, ngaloo ndlela iqinisekisa ukuba izongezo eziveliswe kuyo zinokuthenjwa ngomgangatho nokusebenza ngokukuko. Ukuba ufuna ukuthenga i-resveratrol ngobuninzi, ekuphela kwendawo yokuthenga yi-cofttek.com.
Umququzeleli, ubunkokheli bobunkokheli kwinkampani; I-PhD ifunyenwe kwiYunivesithi yaseFudan kwi-organic chemistry. Ngaphezulu kweminyaka esithoba yamava kwi-organic chemistry kunye noyilo lweziyobisi synthesis; phantse i-10 lamaphepha ophando apapashwe kwiijenali ezigunyazisiweyo, nangaphezulu kweepatent ezintlanu zase China
(1) U-Sonia L. Ramírez-Garza, uEmily P. Laveriano-Santos, uMaría Marhuenda-Muñoz, uCarolina E. Storniolo, uAnna Tress ter-Rimbau, uAnna Vallverdú-Queralt noRosa M. Lamuela-Raventós1 (2018) Iziphumo zezeMpilo zeReverrerol: Iziphumo ezivela kwiZilingo zoNgenelelo loLuntu, Isondlo.10 (12)
(2) UBahare Salehi, Abhay Prakash Mishra, Manisha Nigam, Biler Sener, Mehtap Kilic, Mehdi Sharifi-Rad, uPatrick Valere Tsouh Fokou, Natália Martins, noJavad Sharifi-Rad (2018) I-Resveratrol: iNkemba eHluliweyo eziBini kwiZibonelelo zeMpilo. 6 (3).
(3) UAdi Y. uBerman, uRachel A. Motechin, uMaia Y. Wiesenfeld kunye noMarina K. Holz (2017) Unyango olunokubakho lwe-resveratrol: uphononongo lovavanyo lweklinikhi, npj Ukujonga umthamo we-oncology 1, Inombolo yenqaku: 35 edn.
(4) I-Resveratrol (501-36-0)
(5) Uhambo lokujonga umz.
(6) I-Oleoylethanolamide (oea) -i-wand yemilingo yobomi bakho.
(7) I-Anandamide vs cbd: yeyiphi engcono kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi ngabo!
(8) Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-nicotinamide riboside chloride.
(9) Izongezo zeMagnesium l-threonate: izibonelelo, idosi, kunye neziphumo ebezingalindelekanga.
(10) Palmitoylethanolamide (ertyisi): izibonelelo, idosi, ukusetyenziswa, isongezelelo.
(11) Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(12) Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13) Olona hlobo longezelelekileyo lwe-alpha gpc.
(14) Olona nyango lulungileyo lokuguga lwenicotinamide mononucleotide (nmn).
Ushiye uluvo Rhoxisa impendulo